Goormaa kuugu dambeysay daaficii hore ee Arsenal Emmanuel Eboue oo hanti beelay… – Hagaag.com
Goormaa kuugu dambeysay daaficii hore ee Arsenal Emmanuel Eboue oo hanti beelay…
Posted on 21 Juunyo 2018 by Admin in Sports // 0 Comments
Daaficii hore ee Arsenal Emmanuel Eboue ayaa u sheegay wargeyska Daily Mirror inuu dhaqaale ahaan burburay islamarkaana uu la dagaalamayo fekero qaldan oo isdaba joog ah.
Eboue oo 34 jir ah ma ciyaarin kubada cagta tan iyo markii uu qandaraaskiisa Sunderland la joojiyay ka dib markii FIFA ay ku ganaaxday hal sano oo ciyaaraha laga joojiyey sanadkii 2016, kadib markii uu bixin waayey lacagta contract ee wakiilkiisii hore.
Xiddigii hore ee Ivory Coast ayaa sheegay inuu weli ku nool yahay gurigiisa oo uu la wadaagay xaaskiisii ​​hore Aurelie oo ku yaala Waqooyiga London ka hor inta aanu gelin dagaal sharci dhinaca furiinka ah taasi oo xaaskiisa ku heshay dhammaan hantidiisa.
Waxa uu sheegay in ay aheyd in uu wareejiyo lahaanshiyaha guriga seddax todobaad ka hor, laakin weli guriga ayuu deggan yahay isagoo alaabihiisa boorsooyin iyo baco ugu jiraan, wuxuu sugayaa amarka ka saarida.
“Ma awoodi karo bixinta lacagaha qareenka,” ayuu yiri. “Waxaan joogaa gurigeyga, laakiin waan baqayaa, sababtoo ah ma garanayo waqtiga ay booliisku imaanayaan.
“Mararka qaarkood waan xiraa nalalka sababtoo ah ma doonayo in dadku ogaado inaan gudaha ku jiro, wax kasta waxaan dhigaa albaabka gadaashiisa”.
“Gurigeyga, Waan ku tafashay iibsiga gurigeyga, laakiin hadda waan ka baqayaa, ma doonayo in aan iibiyo dharkayga ama iibiyo waxa aan haysto, waan dagaalami doonaa ilaa dhamaadka maxaa yeelay maaha sidan mid caddaalad ah.”
Eboue, oo Galatasaray ku biiray ka dib markii uu ka tagay Arsenal 2011, ayaa sheegay inuu u soo diray lacagta qeybtii ugu badneyd uu qaatay xaaskiisa iyo seddaxdiisa caruur intii uu joogay Turkiga.
“Waxaan dib u eegayaa oo waxaan is iraahdaa: ‘Emmanuel, aad ayaad ujecelayd … maxaad uga fekeri weysay arrintani kol hore?’ Way adag tahay, “ayuu yiri. “Aad ayay u adag tahay.
“Lacagta aan kasbaday, waxaan u direy xaaskeyga iyo caruurtayda, Turkiga waxaan ka helay 8 milyan euro, waxaan xaaskeyga u diray 7 milyan euro, wax alla wixii ay ii sheegto inaan saxiixo, waan saxiixi jiray.
Waxa uu sheegay in uusan xiriir la lahayn caruurtiisa oo uu ku daray: “Waa wax i xanuunjinaya inaan keligey ahaado la’aantooda.”
Eboue, ayaa sheegay in uu ku qasbanaaday in uu ka daawado Arsenal baararka, waayo ma awooda inuu bixiyo lacagta television-ka (subscription fees), wuxuu sheegay inuu go’aansaday inuusan raacin waddada saaxiibkiisii ​​hore ee Ivory Coast Steve Gohouri, oo jirkiisa laga helay webiga Rhine sannadka 2015.
“Waxaan u wada ciyaarnay xulka Ivory Coast sannado badan ka hor,” ayuu yiri. “Waxa uu ka niyad jabay wax badan, isaga oo is dilay, haa naftiisa ayuu isdhaafiyey.
“Wax walba ayaan u sameeyay, wuxuu u ciyaari jiray Wigan ee kooxaha England, ka dibna wuxuu tegey Germany.
“Maalin maalmaha ka mid ah wuu u qaadan kari waayay, wuxuu gaaray in gaarigiisa ku kaxeeyo biyaha, waxaa la raadinayey muddo todobaad ah kadib inta aan la helin.
“Maaddaama ay sheekadiisa ku qoron tahay madaxayga waxaan go’aansaday in aan sameeynin waxa uu sameeyay.
“Maalin kasta waan tukada, waxaan doonayaa in Ilaah i caawiyo, si uu madaxeyga iiga saaro, ma doonayo inaan ka fekero fikradaha isdilka, waxaan rabaa inaan Ilaahay uu kor u qaado niyadeyda”.
Eboue ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo fursad uu ugu shaqeyn lahaa Arsenal ama Ururka Xirfadleyda Xirfadaha Kubadda Cagta (PFA), laakiin waxaa loo soo bandhigay fursad uu dib ugu laabto shaqada Galatasaray.
Tababaraha Galatasaray Fatih Terim ayaa lagu soo waramayaa inuu diyaar u yahay inuu siiyo Eboue doorka tababarenimo ee kooxda 14 jirada wuxuuna u sheegay CNN Turk: “Waxaan sameyn doonaa wax walba oo aan sameyn karno si aan u caawino saaxiibkeyga.”